Eebba manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinneetti geggeeffamerratti |
Eebba manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinneetti geggeeffamerratti walaloo Lataa Qana’ii dhiheese;
Taphadhaa hin mukaa’iinaa
Finfinneedha yoo ta’e
Biyya abbaa keessaniiti.
Biyya Oromoon wal ga’ee
Fuunfatu tumaa bunaa
Biyya Qajeelaa Dooyyoofi
Kan warra Tufaa Munaa!
Birbirsa gooroofi Boolee
Isa amma fooqiin bareedaa
Coqorsatu irra ture
Dur loon keenyatu dheeda!
Keessaa baqachuu miti egaa
Itti baqachuun gamna
Magaalaa guddaa keenyarratti
Nus guddaa ta’uu qabna!
Finfinneerraa hin godaannu
Akka duriifi kaleessaa
Inni argaa keenya jibbu
Haa godaanu maleessa!
Dachee keenya gadhiisnee
Maal eessatti baqanna?
Afaan keenyaan baranna!
Galmee seenaa gaafadhaa
Kan hin himne jiraaree
Mana barnootaa kana
Dhiiga Oromootu ijaare!
“Finfinneetti hojii hojjechuullee
Ani baay’eeman jaalladha
Garuu, manni barnootaa Afaan Oromoo hin jiru
Mucaa koo eessan dhaqadhaa?”
Warri fagoo teessanii
Har’a kunoo jigeera
Hundeen yaaddoo keessanii.
Gara Finfinnee kottaa – yoo barbaaddan hojjedhaa
Yoo barbaaddan daldalaa
Fulbaanatti ilmi keessan
Mana barnootaa gala!
Intalli keessanis barnootaaf
Afaan hin beekne hin xaxxu
ABCD ishee malee
Minnoo- mindinnoo hin dhaqxu!